निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशियो ! – Khabarhouse
Khabar house | २ असार २०७८, बुधबार १५:३४ | Comments
काठमाडौं : निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुनासाथ निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको छ। बैशाख १५ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुँदा देशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणको काम भईरहेको थियो । सोही मौका छोपेर निर्माण साम ग्रीको भाउ बढाउन थालिएको हो । यो क्रम अझै पनि चलिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।निषेधाज्ञाले सबैजसो क्षेत्र ठप्प प्रायः रहँदा पनि निर्माण क्षेत्र आंशिक रुपमा चलायमान छ । यसैको मौका छोपेर बढ्न थालेको निर्माण सामग्रीको भाउ रोकिने कुनै छाटकाट देखिएको छैन ।
कति महँगियो ? निषेधाज्ञा सुरु हुनु अघिसम्म काठमाडौँमा फलामे डण्डी प्रतिकिलो ८० देखि ८६ रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले किलोमै २४ देखि ३० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको प्रतिकिलो ११६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसअघि जेठ २० सम्म १०६ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको फलामे डण्डीको भाउ जेठ २१ देखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि ह्वात्तै बढेको हो । फलामे छडको मात्रै नभई बालुवा, सिमेन्ट, इँटा र गिट्टीको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।
अहिले सिमेन्टको भाउ बोरामै ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । सिमेन्ट प्रतिबोरा ७५० देखि ८५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । जबकी निषेधाज्ञा अगाडी सम्म सिमेन्ट प्रतिबोरा ७ सयदेखि ७५० रुपैयाँसम्म पाईन्थ्यो । अहिले बजारमा १ हजार वटा १ नम्बर इँटाको भाउ १७ हजार ५ सयदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । जबकी यसअघि १ नम्बर इँटा १६ हजार ५ सय रुपैयाँमा १ हजार वटा पाइन्थ्यो ।
महँगिनुको कारण के ? को’रो ना भाइरसका कारण लामो समय निर्माण क्षेत्र पनि सिथिल बन्यो। विस्तार लय समात्न सुरु गरिरहेकै बेला पुनः लकडाउन भयो। तर पनि फाट्टफुट्ट निर्माणका काम जारी रहेको मौकामा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले मूल्य बढाएर बढी नाफा राखेको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । अर्को कुरा, विगतमा मनसुन सुरु हुने समयमा निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्दै आएको थियो ।
बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धताले विगतमा निर्माण सामग्रीको उत्पादन पनि बढी हुने गर्दथ्यो भने निर्माणको काम कम हुने गर्दथे। तर, यसपाली भने उद्योगीहरुले कम मात्रामा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने र कम उत्पादनबाटै बढी लाभ लिने रणनीति अपनाएका कारण भाउ अचाक्ली बढेको दाबी ठेकेदारहरुको छ । तर, सिमेन्ट र फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु भने निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।